Sheekh Nuur Baaruud oo shaaca ka qaaday cidda gadaal ka riixeysa sharciga dambiyada galmada | Xaysimo
Home War Sheekh Nuur Baaruud oo shaaca ka qaaday cidda gadaal ka riixeysa sharciga...
Sheekh Nuur Baaruud oo shaaca ka qaaday cidda gadaal ka riixeysa sharciga dambiyada galmada
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mida culimada Soomaalida ayaa ka hadlay Sharciga Denbiyada Galmada ee Baarlamaanka Soomaaliya la hor geeyey kaasoo uu guddoonka diiday in laga doodo.
Sheekh Nuur ayaa sheegay inuu isaga si shakhsi ah u og yahay in Wasiiradda xilka sii heysa ee Haweenka iyo Xuquuqda Insaanka xukuumadda Soomaaliya Deeqa Yaasiin ay tahay cidda gadaal ka riixeyso sharcigaan.
Wuxuu guddoonka Baarlamaanka uga mahad celiyey inay ka hor yimaadaan sharcigaan, isagoo arrintaas ku tilmaamay tallaabo ay ku gudanayeen waajibaad diini ah.
Sheekh Nuur oo si toos ah ula hadlayey wasiir Deeqa Yaasiin ayaa u sheegay in dalkaan uusan aheyn wadanka ay moodeyso, wuxuuna ugu baaqay inay sharcigaan ula laabato ciddii usoo dhiibtay una sheegto in laga soo diiday.
“Wasiirada haweenka ee sharcigan keentay in muddo ahna waday oo aan si shaqsi ah u ogahay, Waxaan leeyahay wallaaley joogso, Wadankan midka aad mooday maaha, haddii ay jiraan kuwo kusoo diray waa la iga diiday ku dheh” . ayuu yiri Sheekh Nuur.
Dhinac kale wuxuu Sheekh Nuur Baaruud ugu baaqay inay towbad keento xildhibaanad ka tirsan Baarlamaanka Federaalka oo lagu magacaabo Maryan Haaruun oo soo jeedisay in sifada Muslimnimo laga saaro shuruudaha mas’uuliyiinta qabanaba xilalka dalka.
Wasiirad Deeqa ayaa si weyn loogu eedeeyay in muddo badan ku dhegan tahay Sharcigan oo ay taageero uga heshay Beesha Caalamka, waxayna hore uga shaqeyn jirtay ururrada haweenka NGO-yada ah oo arrimaha haweenka ku lug lahaa muddo dheer.
Ugu dambeyntii Sheekh Nuur Baaruud ayaa madaxda ugu sareeyo dalka ugu baaqay inay ka fiirsadaan dadka ay xilalka umadda u dhiibayaan ee aan lahayn aqoonta Diinta Islaamka.